Iindaba ze-4 ezivela kwiGoogle Earth 6.3 - Geofumadas
Matshi, 2012 Google umhlaba / imephu, ezintsha
Ndikhuphela inguqulo ye-beta yeGoogle Earth 6.2.1.6014 kwaye ndixhasa oko umsebenzisi endixelele khona, kukho ezinye izinto eziphuculayo. Nangona kukho ezinye izinto ezincinci, ngeenjongo zethu ezi zintando ze-4 zibonakala zincedo kum; nangona ezinye zale nto ibonakala kwi-6.2 version, kubonakala ngathi ngoku badibanise ngakumbi.
1. Faka izikhokelo ze-UTM kwiGoogle Earth ngqo
Ngoku kunokwenzeka ukufaka izilungiso kuyo Ifomathi ye-UTM. Ngenxa yoko, ngokuqinisekileyo kufuneka sibe neepropati ezilungiselelwe ukusibonisa izilungelelaniso ezicetywayo:
Izixhobo> Iinketho> Umbono we-3D kwaye apha sele iqulunqwe Universal Traverso de Mercator
Ngaloo ndlela, xa ufaka uphawu lokuma:
Esi sikrini sibonakala, apho kunokwenzeka ukuchaza uMmandla, u-East Coordinate kunye neNyakatho Coordinate. Sifanele sikhumbule ukuba umyalelo ungasifikisana nathi ngenxa yokuba sisetyenziswe ukusebenzisa ifom ye X, kwaye ngeli xesha kulokho okukuqala yi-Latitude (Y) kunye ne Ubude (X).
Akulunganga, nangona kungenasweleko kuba akunakwenzeka ukwenza ngeendlela okanye iipolgoni, kwaye kunjalo akunakwenzeka ukuba kwenziwe ulungelelanisa uludwe.
2. Yongeza iifoto kwiGoogle Earth
Lolu uhlobo olutsha lwento, oluya kwandisa kulawo ayenakho (indawo, indlela, ipoloni kunye nomfanekiso ogqithisiweyo), nale nto unako ukongeza ifoto:
Lapha uvumela indawo ibe nomfanekiso onokuthi ube yindawo okanye i-intanethi. Unokubeka i-angle yokujikeleza, ukuphakama kokubonakala, ukungafihli kunye nokuphakama kwekhamera. Emva kokufakiwe, njengoko isondela, iyatshintsha nje ngokuphakama kokubonakala esikuchazile. Into ebangel 'umdla kukuba lo mfanekiso unokuba neepropati ukwenzela ukuba xa ucofa, ubonisa idatha, naphi na emfanekisweni apho uqakraza khona ... siza kubona ukusetyenziswa okusebenzayo okunokwenziwa yile iphupha lentaba, ngakumbi nge-mobiles okanye iipilisi ezinenkxaso yenkxaso xa uthatha imifanekiso.
Yongeza ifoto kunye namaxilisi kwiipropati zento
Oku kwakufuneka kwenziwe ngaphambili html ecocekileyo. Ngoku udale amaqhosha athile ukuze ungeze umfanekiso okanye hyperlink kwaye ufake isicelo seengongoma, iindlela, iipolgoni okanye iifoto.
Oku kwenzekayo xa ungeze umfanekiso.
Elinye iqhosha lisetyenziswa (Yongeza umfanekiso...), umendo ufakwe kwaye ngokucinezela iqhosha ukwamukela:
Ufumana itekethi ye-html esiyichazile ngaphambili. Akuyona into ebalulekileyo kwimvelaphi, abazange baququzelele ukudala i-html code kodwa akukho zakhiwo zeesayizi zomfanekiso, umzekelo uya kuba nzima ukufaka ukuba umntu akakwazi ulwimi.
Faka isixhumanisi senethiwekhi
Oku kuhlala kubonakala, banako ubuninzi obunxulumene nobuchule obuza kunye ne-Google Earth ukufaka isiphequluli esibonisa idatha kwi-intanethi ngaphandle kokuhamba; i-html kuphela kodwa i-css. Oku kwenziwa nge:
Yongeza> Unxibelelwano lwenethiwekhi
Khangela ukuba ndidibanise iikhowudi ze-Geofumadas ezibonakaliswa kwisiphequluli, jonga indlela ikwazi ngayo ukubonisa indawo yonke, njengokungathi upheqa kwi-Chrome. Kukho iqhosha elibonisa ukhetho lokulivula kwi-Internet Explorer nangona livula kwi-browser.
Ungakwazi kwakhona ukufaka imodeli yangaphandle yefayile, nangona ngoku ixhasa kuphela i-Collada (.dae) ifomethi.
Ngethuba nje ingqungquthela engqinileyo ingafiki, ungayilanda iGoogle Earth 6.2.1.6014 Beta kule ndawo
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukutshintsha ED50 ifayile DGN ku ETRS89
Post Next I-Cybernetics, inkonzo enkulu yokubambaOkulandelayo "
Enye Impendulo kwi "4 News kwiGoogle Earth 6.3"
Into enhle into endiyenzayo kodwa ndiyenza ngoma kwaye ndiyakwazi ukukhuphela enye enmitelefono